Samsung Galaxy A03/A03s/A03 Core အတွက် ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူနည်း
မိုဘိုင်းဒေတာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ iPhone ဒေတာဆယ်တင်ရေး Android ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်း။ ဒေတာဆယ်တင်ရေး iPhone iPad လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။ iPhone နှင့် Android Eraser မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာ
iOS ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်း။ Android ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်း။ မိုဘိုင်းဒေတာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ Hard Disk နှင့် Card Data Recovery
ရှေ့စာမျက်နှာ > Android ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်း။ > Samsung Galaxy A03/A03s/A03 Core အတွက် ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူနည်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: ဤဆောင်းပါးသည် သင့်အား Samsung Galaxy A03/A03s/A03 Core တွင် လုံခြုံစွာနှင့် ထိရောက်စွာ ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူနည်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
Samsung Galaxy A03 သည် 720P+ ရုပ်ထွက်ကို ပံ့ပိုးရန် 6.5 လက်မ Infinity-V HD+ မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲပိုင်းအရ 1.6GHz octa-core master နှင့် 4GB + 128GB အထိ သိုလှောင်မှုပေါင်းစပ်မှု တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကင်မရာပုံစံဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ Galaxy A03 သည် 48-megapixel ပင်မကင်မရာ + 2-megapixel depth-of-field ကင်မရာနှင့် အရှေ့ဘက် 5MP ကင်မရာတို့ပါဝင်သော အနောက်ကင်မရာနှစ်ခု module ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းအရ Galaxy A03 တွင် 5,000 mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်။
Samsung Galaxy A03s သည် 6.5 လက်မ LCD ရေစက်ချစခရင်ကို အသုံးပြုထားသည်။ core configuration တွင် Galaxy A03s သည် Helio G35 ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်ထားပြီး 4GB + 64GB သိုလှောင်မှုပေါင်းစပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ကင်မရာတွင်၊ Galaxy A03s ၏အရှေ့ဘက်ကင်မရာသည် 5MP ဖြစ်ပြီး နောက်ကင်မရာသည် 13 MP ပင်မကင်မရာ + 2MP macro ကင်မရာ + 2MP Tof မှန်ဘီလူးတို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသည်။ ဘက်ထရီ သက်တမ်းအရ Galaxy A03s သည် 5,000 mAh ဘက်ထရီကို အသုံးပြုထားသည်။
Samsung Galaxy A03 Core တွင် 720P ရုပ်ထွက်နှင့် ထောက်ပံ့သည့် 6.5 လက်မ မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ကိုယ်ထည်အရွယ်အစားမှာ 164.2mm*75.9mm*9.1mm ဖြစ်သည်။ core configuration အရ Galaxy A03 Core သည် Ziguang Zhanrui SC9863A octa-core ချစ်ပ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ကင်မရာဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ Galaxy A03 Core သည် အနောက်ကင်မရာသည် 8 သန်း pixels ရှိပြီး ရှေ့ကင်မရာသည်5သန်း pixels ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ထည်တွင် 5000mAh ဘက်ထရီပါဝင်ပြီး အားသွင်းအမြန်နှုန်း 10W ဖြစ်သည်။
စစ်တမ်းအရ၊ အသုံးပြုသူအများအပြားသည် Galaxy A03/A03s/A03 Core အသစ်ကိုရရှိပြီးနောက် ဖုန်းအဟောင်းမှ ဒေတာများကို ဖုန်းအသစ်သို့ မည်ကဲ့သို့ synchronize လုပ်ရမည်ကို မသိကြပေ။ ထို့အပြင်၊ ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားသောဒေတာများကို အမြန်ပြန်ယူနိုင်စေရန်နှင့် ၎င်းအား Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ ပြန်လည်ရယူရမည်ကို ၎င်းတို့မသိကြပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤဆောင်းပါးတွင် သင့်အတွက် ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူရန် နည်းလမ်းများစွာကို ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ဒေတာလွှဲပြောင်းရန် လိုအပ်ပါက အပိုင်း 1 နှင့် အပိုင်း2ကိုဖတ်ပါ။ Galaxy A03/A03s/A03 Core၊ အပိုင်း3နှင့် အပိုင်း4တွင် ပျောက်ဆုံးသွားသောဒေတာများကို ပြန်လည်ရယူရန် လိုအပ်ပါက၊ အပိုင်း3နှင့် အပိုင်း4တွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပြန်လည်ရယူရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို သင့်အား မိတ်ဆက်ပေးအပ်ပါသည်။
အပိုင်း 1။ Android/iPhone မှ ဒေတာများကို Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ လွှဲပြောင်းပါ။
အပိုင်း 2။ အ ရန်ဖိုင်များမှ ဒေတာကို Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ စင့်ခ်လုပ်ပါ။
အပိုင်း 3။ Galaxy A03/A03s/A03 Core တွင် ဖျက်ထားသော ဒေတာများ ပြန်လည်ရယူပါ
အပိုင်း 4။ Backup Files မှဒေတာကို Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ ပြန်လည်ရယူပါ။
Galaxy A03/A03s/A03 Core အသစ်ကို သင်ရသောအခါ၊ ဖုန်းဟောင်းရှိဒေတာကို သင်မည်သို့ကိုင်တွယ်သင့်သနည်း။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဖုန်းဟောင်းမှ အရေးကြီးဒေတာများကို Galaxy A03/A03s/A03 Core အသစ်သို့ လွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းတွင်၊ သင့်ဖုန်းဟောင်းမှ ဒေတာများကို Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းရန်အတွက် ထိရောက်သောနည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
Mobile Transfer သည် သင့်ဒေတာများကို လျင်မြန်စွာ လွှဲပြောင်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများစွာကို ဒေတာများကို ဘေးကင်းကင်းနှင့် လျင်မြန်စွာ လွှဲပြောင်းရန် အောင်မြင်စွာ ကူညီပေးခဲ့သည်။ အဆက်အသွယ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အော်ဒီယိုများ၊ SMS မက်ဆေ့ချ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ၊ APPs စသည်တို့ကဲ့သို့ ဒေတာများကို တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းရန် သင့်အား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ၎င်း၏ထုတ်လွှင့်မှုသည် 100% အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ Galaxy A03/A03s/A03 Core ၏ ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းကို အပြီးသတ်ရန် မိုဘိုင်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို သင် ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင်အလွန်လိုက်ဖက်မှုရှိသည်။ Galaxy A03/A03s/A03 Core အပါအဝင် စက်ပစ္စည်းမော်ဒယ် 7000 ကျော်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆင့် 1: Mobile Transfer ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
သင့်ကွန်ပြူတာတွင် Mobile Transfer ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပြီး ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက် စာမျက်နှာပေါ်ရှိ "ဖုန်းမှ ဖုန်းလွှဲပြောင်းခြင်း" မုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
အဆင့် 2: စက်ပစ္စည်းကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
Android/iPhone နှင့် Galaxy A03/A03s/A03 Core ကို ကွန်ပျူတာသို့ ချိတ်ဆက်ရန် USB ကြိုးကို အသုံးပြုပါ။ ထို့နောက် စာမျက်နှာပေါ်ရှိ Source (Android/iPhone) နှင့် Destination (Galaxy A03/A03s/A03 Core) တို့ကို စစ်ဆေးပါ။
အကြံပြုချက်- Source နှင့် Destination display သည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါက၊ သင်သည် ဖုန်းနှစ်လုံး၏ အနေအထားများကို ပြောင်းရန် "Flip" ကို နှိပ်နိုင်ပါသည်။
အဆင့် 3: လွှဲပြောင်းရန်ဒေတာကိုရွေးချယ်ပါ။
စာမျက်နှာပေါ်တွင် လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ဒေတာအမျိုးအစားအားလုံးကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သောဒေတာကိုရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက်ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန် "စတင်လွှဲပြောင်း" ကိုနှိပ်ပါ။
အပိုင်း 2။ အရန်ဖိုင်များမှ ဒေတာကို Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ စင့်ခ်လုပ်ပါ။
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဟောင်း အနားမှာ မရှိတဲ့အခါ ဒေတာတွေကို ဘယ်လို လွှဲပြောင်းမလဲ။ သင်သည် Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ အရန်ကူးထားသောဒေတာကို တိုက်ရိုက်ထပ်တူပြုနိုင်သည်။ ဤအပိုင်းသည် Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ အရန်ကူးယူထားသောဒေတာကို တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန် သင့်အတွက် ထိရောက်သောနည်းလမ်းကို ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။ လိုအပ်သောဒေတာအရန်သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း မှတ်သားထားသင့်သည်။
အဆင့် 1: မိုဘိုင်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Mobile Transfer ကိုဖွင့်ပြီး စာမျက်နှာပေါ်ရှိ "အရန်သိမ်းခြင်းမှ ပြန်လည်ရယူခြင်း" မုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
Galaxy A03/A03s/A03 Core ကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် USB ကြိုးကို အသုံးပြုပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲသည် သင့်စက်ပစ္စည်းကို အလိုအလျောက် သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ Galaxy A03/A03s/A03 Core ကို စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပြသပြီးနောက်၊ သင်သည် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ဆက်လက်သွားနိုင်ပါသည်။
အဆင့် 3: စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင် backup ဖိုင်များအားလုံးကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်လိုအပ်သော အရန်ဖိုင်ကို ရွေးပါ၊ ထို့နောက် စာမျက်နှာ၏ အလယ်ရှိ လိုအပ်သော ဒေတာအမျိုးအစားကို ရွေးပါ။ ရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ အရန်ကူးထားသောဒေတာကို ထပ်တူပြုရန် "Start Transfer" ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း စက်ပစ္စည်းသည် မည်မျှကောင်းမွန်သည်ဖြစ်စေ ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေတာဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ Galaxy A03/A03s/A03 Core တွင် ဒေတာ ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါ၊ သင်သည် အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များအရ လိုအပ်သော ဒေတာကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။
Samsung Data Recovery သည် အလွန်ထိရောက်ပြီး ဘေးကင်းသောဒေတာပြန်လည်ရယူသည့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ မတော်တဆ ဒေတာဖျက်ခြင်း၊ သင့်စက်ပစ္စည်းကို ဖော်မတ်ချခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှု၊ သင့်ဖုန်းတွင် ရေဝင်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင် ကွဲသွားခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းများကြောင့် ဒေတာဆုံးရှုံးသွားသည်ဖြစ်စေ Samsung Data Recovery သည် သင့်ဒေတာကို လုံခြုံစွာ ပြန်လည်ရယူရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒေတာပြန်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အန္တရာယ်မရှိသည့်အပြင် သင့်ဒေတာများ ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်း၏လိုက်ဖက်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည် Samsung၊ Huawei၊ ZTE၊ Google၊ Meizu၊ Redmi၊ Lenovo၊ OPPO နှင့် vivo ကဲ့သို့သော စျေးကွက်ရှိ ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အများစုနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ပြန်လည်ရယူရန် ပံ့ပိုးပေးသည့် ဒေတာသည် အလွန်ပြည့်စုံပြီး ကြွယ်ဝသည်။ ၎င်းသည် Galaxy A03/A03s/A03 Core တွင် အဆက်အသွယ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အသံ၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အီးမေးလ်များ၊ WhatsApp ချတ်မှတ်တမ်း စသည်ဖြင့် ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။
အဆင့် 1: ပြန်လည်ရယူခြင်းမုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Samsung Data Recovery ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပြီး ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်ဆော့ဖ်ဝဲ၏ပင်မစာမျက်နှာရှိ "Android Data Recovery" မုဒ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
Galaxy A03/A03s/A03 Core ကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် USB ကို အသုံးပြုပါ။ ထို့နောက် ဖုန်းတွင် USB အမှားရှာပြင်ခြင်းကို ဖွင့်ပါ၊ သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. Galaxy A03/A03s/A03 Core ရှိ ဆက်တင်များကို ရှာပါ။
2. Build Number ကိုရှာပြီး7ကြိမ်ဆက်တိုက်နှိပ်ပါ။
3. ဆက်တင်များသို့ပြန်သွားပြီး Developer Options ကိုနှိပ်ပါ။
4. USB Debugging Mode ကို စစ်ဆေးပါ။
အဆင့် 3: ဒေတာကိုစကင်န်ဖတ်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲသည် သင့်စက်ပစ္စည်းကို အောင်မြင်စွာ တွေ့ရှိသောအခါ၊ စာမျက်နှာပေါ်ရှိ ပြန်လည်ရယူနိုင်သော ဖိုင်အမျိုးအစားအားလုံးကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်ရယူလိုသည့် ဖိုင်အမျိုးအစားကို ရွေးပါ၊ ထို့နောက် စကင်ဖတ်ရန် "Next" ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် 4: ရွေးချယ်ထားသောဒေတာကို အစမ်းကြည့်ရှုပြီး ပြန်လည်ရယူပါ။
စကင်န်ဖတ်ခြင်းပြီးပါက၊ စကင်န်ဖတ်ထားသော အချက်အလက်အားလုံးသည် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပေါ်လာပါမည်။ Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ ပြန်လည်ရယူရန် လိုအပ်သောဒေတာကို အစမ်းကြည့်ရှုပြီး ရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန် "Recover" ကိုနှိပ်ပါ။
အပိုင်း 4။ အရန်ဖိုင်များမှ ဒေတာကို Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ ပြန်လည်ရယူပါ။
သင့်ပျောက်ဆုံးသွားသောဒေတာတွင် အရန်ဖိုင်တစ်ခုရှိနေပါက၊ မိတ္တူကူးထားသောဒေတာကို သင့်ဖုန်းတွင် ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ဤအပိုင်းသည် Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ အရန်ကူးထားသော ဒေတာကို အမြန်ပြန်ယူနည်းကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။
အဆင့် 1: Samsung Data Recovery ကို run
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Samsung Data Recovery ကိုဖွင့်ပြီး ပင်မစာမျက်နှာရှိ "Android Data Backup&Restore" မုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်၏ Galaxy A03/A03s/A03 Core ကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် USB ကြိုးကို အသုံးပြုပါ။
အဆင့် 3: ပြန်လည်ရယူခြင်းမုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်လိုအပ်ချက်အရ "Device Data Restore" သို့မဟုတ် "One-click Restore" မုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် ကွန်ပျူတာရှိ အရန်ကူးယူထားသော အချက်အလက်ကို ရှာဖွေပြီး စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပြသမည်ဖြစ်သည်။
အကြံပြုချက်- စက်ပစ္စည်းဒေတာကို ပြန်လည်ရယူခြင်း- Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ ပြန်လည်ရယူရန် အရန်အရန်အတွင်းရှိ မည်သည့်ဒေတာကိုမဆို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း- တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် အရန်ဖိုင်ရှိ ဒေတာအားလုံးကို Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
အဆင့် 4: ဒေတာကို အစမ်းကြည့်ရှုပြီး ပြန်လည်ရယူပါ။
စာမျက်နှာရှိ အရန်စာရင်းတွင် သင်လိုအပ်သော အရန်ဖိုင်ကို ရွေးပါ၊ ထို့နောက် အရန်ကူးထားသော ဒေတာကို ထုတ်ယူရန် "Start" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ထုတ်ယူထားသော အရန်ကူးကို စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပြသပါမည်။ Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ ပြန်လည်ရယူလိုသည့် ဒေတာကို အစမ်းကြည့်ရှုပြီး ရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ Galaxy A03/A03s/A03 Core သို့ အရန်ကူးယူထားသော ဒေတာကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် "Restore to Device" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ သို့မဟုတ် နှိပ်ပါ။ ၎င်းတို့ကို သင့်ကွန်ပျူတာသို့ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန် "Restore to PC" ခလုတ်။
Samsung Galaxy A13/A73(5G) အတွက် ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူနည်း
ရက် 30 ငွေပြန်အမ်းအာမခံ
iPhone iPad လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။
iPhone နှင့် Android Eraser